Otu esi aga leta Petra, akụ nke Jọdan | Akụkọ Njem
Otu esi aga leta Petra, akụ nke Jọdan
Mariela Carril | | Nduzi, Jordan
Obi abụọ adịghị ya na odida obodo nke Petra ị maara ya. Ọ bụ kaadị jordan ma ọ pụtakwara n'ọtụtụ fim Hollywood. Ọ dị ka ụzọ ụzọ gara aga, ihe omimi, na nke ochie. Eziokwu bụ na ịnweghị ike ịhazi njem na Jọdan na-enweghị njem njem gaa ebe a mara mma nke nwere nsọpụrụ ịbụ Ihe Nketa sincewa kemgbe 1985.
Naanị ịgagharị ebe ahụ nwere ike ikwenye na aha a dị irè maka ntụ ọ bụla, nkume ọ bụla, kọlụm, ụlọ nsọ na nka fọdụrụ n'anya anyị n'agbanyeghị na oge agabigala, yabụ nke a kachasị mma ozi bara uru iji gaa Petra.
2 Otu esi aga Petra
3 Ogige Ntụrụndụ Petra
Obodo a ọ bụbu isi obodo nke alaeze Nabataea ọtụtụ puku afọ gara aga, alaeze nke ama odụk Obio Ukara Rome nke ahụ lekọtara ịkwalite obodo ahụ ruo mgbe ọ ghọrọ ebe azụmahịa dị mkpa. Ọbụna na-ata ahụhụ oke ala ọma jijiji, ọ jisiri ike oge na naanị n'oge Saladin, ka ọ na-erule na njedebe nke afọ 1100, a hapụrụ ya n’aka nke ọzara ma gafee n’ime nchefu.
Dị ka ọtụtụ akụ nke ụwa oge ochie laghachiri na narị afọ nke XNUMX n'aka ndị na-eme nchọpụta na Europe, na nke a site n'aka onye Switzerland aha ya bụ Burckhardt. Ọ bụ nyocha ya dọtara ndị na-eme nchọpụta ndị ọzọ wee mepụta ihe atụ magburu onwe ya nke ga-abụrịrịrịrị ndị nwere mmasị n'ihe karịrị otu onye ọkà mmụta ihe ochie. Agbanyeghị, ọ bụ n'afọ ndị 20 ka ihe omimi ndị ọkachamara mbụ mere.
Taa Petra bụ otu n'ime akụ ndị dị oké ọnụ ahịa nke Alaeze Jọdan na mgbakwunye na ịbụ Ebe Nleta Worldwa ọ bụkwa otu n’ime ihe ịtụnanya ọhụrụ asaa dị n’ụwa.
Otu esi aga Petra
Enwere ọtụtụ nhọrọ, ihe niile dabere na ebe mmalite gị. Ọ bụrụ na ị nọ na amman, isi obodo Jọdan, e nwere ọtụtụ ụgbọ ala na-apụ site na 6: 30am wee rute mkpọmkpọ ebe gburugburu 10:30 am. Ha sitere na ụlọ ọrụ Ụgbọ ala JET. Nloghachi njem malitere na 5 pm na tiketi na-efu JD 10 kwa ụkwụ. Etgbọ mmiri ya nwere ụgbọ ala nke oge a, 200 na mkpokọta, ọ na-emekwa ọtụtụ njem ndị ọzọ na mba ahụ.
I nwekwara ike iji ibgbọ ala ọha na-aga Wadi Musa na-apụ n'ụlọ ọdụ Mujamaa Janobi. Njem ndị a sitere na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke mgbede, ebe na-adịghị anya ha na-amalite n ’elekere isii nke ụtụtụ ma ọrụ ikpeazụ bụ na 9 elekere. Ọ bụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa Ọfọn, ọ na-efu ọkara. ¿Ị nwere ike were tagzi? Ee, ma site na Amman ma site na ọdụ ụgbọ elu Queen Alia na ọnụego ya bụ 90 JD ma ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala na 130 ọ bụrụ na ị gafere van, maka ụgbọala dum abụghị onye ọ bụla.
Ibgbọ ala ndị mmadụ jikọtara Aqaba na Wadi Musa na-eme njem n'etiti ọdụ ndị uwe ojii nke obodo abụọ ahụ. Enwere ọrụ ise kwa ụbọchị ma ọ naghị arụ ọrụ na Fraịde. Nke mbụ na-ahapụ ihe dị ka elekere isii nke ụtụtụ wee pụọ mgbe o juru. Njem a na-ewe otu awa na ọkara, awa abụọs na ị ga gbakọọ a tiketi n'etiti 5 na 6 JD. N’ikpeazụ ị nwekwara ike were tagzi, tagzi na-acha ọcha na-apụ n’ọdụ ndị uwe ojii. Ha dị gburugburu 35 JD mana ọ nwere ike were mmadụ anọ. Enwekwara tagi na-acha akwụkwọ ndụ, ndị a ọbụna na-akpọrọ gị gaa n’ókèala Israel, ihe dịka 90 JD.
Site na obodo ndị dị ka Wadi Rum ma ọ bụ Madaba ị nwekwara ike ịbanye Petra. Site na bọs site na isii nke ụtụtụ. Bulie ndị njem na Wadi Rum Visitor Center, kwụsị na Rum obodo wee rute Petra gburugburu 6:8 am. Ọ na-efu ihe dịka 30 ma ọ bụ 5 JD. E nwekwara tagzi. Ma otu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ iso Madaba.
Njem a mara mma nke ukwuu n'ihi na bọs ndị njem na-agagharị n'okporo ụzọ Highway, nke mara ezigbo mma, nke mere na enwere foto nkwụsị na Wadi Mujib na nke ọzọ na Karak Castle otu awa tupu ị rute na Wadi Musa na elekere 3. 4 elekere. N'ezie, ịnwere ike iji ọrụ a naanị ma ọ bụrụ na ị nọrọ na Hotel Mariam, ọ bụ ezie na ụlọ oriri ndị ọzọ na-enye ọrụ yiri ya. Chọpụta.
Ọzọkwa enwere njem mmụta na Petra site na ọwụwa anyanwụ Israel. Enwere ókè-ala ókè n’etiti Izrel na Jọdan: Allenby Bridge, Eilat, na Beit Shean. Nke mbu jikọtara Jerusalem na Amman mana ị ga-enwerịrị visa nke Jordan ka hazie tupu oge eruo. Gafe abụghị ihe mgbagwoju anya mana ọ na-ewe ogologo oge ka ọ dabere na oge ị nwere. Nwere ike ịhazi njem dị oke ọnụ mana nke mmanụ mmanụ dị mma.
Ogige Ntụrụndụ Petra
Ọ bụ nnukwu saịtị ma ị nwere ike ịchọpụta ya nke ọma, ọ bụ ezie na ndị obodo na-enyekarị onwe ha dị ka ihe nduzi. Agbanyeghị, enwere ndị na-atụ aro ka ụbọchị anọ ma ọ bụ ise mee nyocha zuru oke. N’enweghi obi uto, m ga - ekwu na abuo ma obu ato zuru. Otu ụbọchị ga-eme ka ike gwụ gị na mmetụta nke ị nweghị njem ọ bụla. Twobọchị abụọ zuru ezu ezuola.
Wadi Musa bụ obodo nke oge a nke dị na mpụga ogige ahụ, taa banyere ihe dị ka puku mmadụ iri atọ bi na ya. O juputara na ulo oru ndi njem, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye maka njegharị na hotels na ebe obibi ndị ọzọ. Ọ bụ obodo na-adịghị ize ndụ nke nwere ndị enyi enyi ma ị nwere ike ịnọ ebe a ma ọ bụ nso nso ogige ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụrụ otu a, ịnwere ike ịga ije na mkpọmkpọ ebe, ma ọ bụghị na ịnwere ike ịnara tagzi mgbe niile. Na-esote ogige ahụ, enwere ebe a na-adọba ụgbọala na ọdụ bọs na Amman ma ọ bụ Aqaba.
Tiketi adịghị ọnụ ala mana ị na-etinyekwu oge ị ga-eji na-eleta ndị ọbịa. Tiketi otu ụbọchị maka ndị na-anọ ma ọ dịkarịa ala otu abalị na Jordan na-efu 50 JD, ụbọchị abụọ 55 na ụbọchị atọ JD Ọ bụrụ na ị gara Petra ozugbo ị gafere ókè ahụ, ọ bụ 60, 90 na 40 JD karị. Ọ bụrụ n ’ịnọ kwa abalị ma laghachị na mkpọmkpọ ebe ụbọchị nke abụọ, ị ga-enweta nkwụghachi nke 50 JD.
Ọ bụrụ n ’ịnọghị n’abalị, mgbe ahụ nnabata bụ 90 JD. Mgbe ị na-azụ tiketi ị ga-eweta akwụkwọ ikike ngafe. A na-azụta ya na itorlọ Ọrụ Ọbịa tupu ma ọ bụ mgbe ị gara na ị nwere ike kwụọ ụgwọ na ego ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Ha tụpụtara atọ njegharị nlegharị anya:
Onye isi ụlọ ọrụ Camino, na-eme njem kilomita 4 ma na-efu 50 JD.
Roadzọ Okporo Roadzọ + Ncheta Sacchụ àjà, na-agba 6 km
Okporo ụzọ + ebe obibi ndị mọnk, na-aga 8 km.
Na gọọmentị webụsaịtị ị nwere ike ile anya njegharị ndị a na ụfọdụ ndị ọzọ ka a ga-ebipụta na November a. E nwekwara njegharị ụgbọ ala: e nwere abụọ, otu na-ejikọ Ebe Visitor na Treasury (njem gburugburu), 4 km), na 20 JD; na ọzọ ejikọ Center na Museum (gburugburu njem, 8 km), maka 40 JD. Ha bụ ụgbọ ala maka mmadụ abụọ.
Enweghị ike ịhapụ nleta Petra n'ụzọ bụ isi: Bab Al Siq, Dam, Siq, ihe a na-akpọ Treasury ma ọ bụ Al Khazna (ama ama ama nke obodo ahụ), ihu ndị ọzọ dị n'akụkụ otu okporo ụzọ, thelọ ihe nkiri ahụ, ili silk, ili Urn, ili nke obí, ebe ndị Kọrịnt, ebe a na-eli ozu ndị Rome, ofzọ nke Ogidi, Nnukwu Templelọ Nsọ, nnukwu ụlọ ụka Petra, ụlọ nsọ nke ọdụm nku, ebe ịchụ àjà, Roman Soldier, ebe obibi ndi mọnk ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Otu esi aga leta Petra, akụ nke Jọdan
Ihe ịhụ na Munich
9 free ihe na-enwe na Rome